CIO: hahemotra amin’ny taona 2026 ny lalao olympika ho an’ny tanora | NewsMada
CIO: hahemotra amin’ny taona 2026 ny lalao olympika ho an’ny tanora
Par Taratra sur 17/07/2020
Nanaiky ny fangatahan’i Se­negaly ny eo anivon’ny Komity iraisam-pirenena Olympika, ny amin’ny tokony hanemorana ny lalao olympika ho an’ny tanora, kasaina hatao ny 22 oktobra hatramin’ny 9 novambra 2022 any Dakar, Senegaly. Mano­loana ny fanambaran’ny filohan’ny CIO, i Thomas Bach, fa hahemotra efa-taona ity lalao ity, ka amin’ny taona 2026 ny hanatanterahana izany. Noha­mafisiny, efa nifandinihana nandritra ny fihaonan’ny komity mpanatanteraka eo anivon’ny CIO izao fanapahan-kevitra izao.
Noho ny antony ara-pahasalamana sy ny krizy aterak’izany no tena anton’ny nangatahan’ny filoha senegaley, Macky Sall, ny fanemorana. Fanemorana ha­hafahan’ny CIO, ny Komity na­sionaly ary ny federasiona iraisam-pirenena, mampitombo ny ezaka hanomanana ity lalao olympika ho an’ny tanora ity. To­raka izany koa ny firenena senegaley, afaka manatsara ny fandraisana ny fifaninanana.
Tsiahivina fa nankatoavina, omaly, ity fanemorana ny lalao olympika ho an’ny tanora ity, nifaneken’ny filohan’ny CIO, i Thomas Bach sy ny filoha senegaley, Macky Salle. Hohama­fisina, anio zoma 17 jolay, mandritra ny fivorian’ny komity iraisam-pirenena Olympika kosa izany fanapahan-kevitra izany, araka ny loharanom-baovao.